Wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Puntland oo badgariir uga digtay dadwaynaha xeebaha degan – Radio Daljir
Wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Puntland oo badgariir uga digtay dadwaynaha xeebaha degan
Garowe, Apr 11 – Wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Puntland ayaa soo saartay digniin ku wajahan badgariirka Tsunaamiga oo la aaminsayahay inay waqtiyada soo socda inay kusoo wajahantahay xeebaha Soomaaliya.
Agaasimaha wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Puntland Cabdiwaaxid Maxamed Xirsi Joocaar oo waraysi siinayay Radio Daljir ayaa tilmaamay inay heleen xogo tilmmaamaya in tsunamiga arooryadii hore ee maanta ku dhuftay dalka Indonisia inuu ku fidi doono xeebaha Soomaaliya iyo Kenya.
Agaasimaha ayaa uga digay dadwaynaha inay ka fogaadaan xeebaha islamarkaana gaadiidkooda iyo naftooda ay ka badbaadiyaan khatarada dhinaca badda kasoo wajihi karta.
Mudane Joocaar, ayaa hoosta ka xariiqay tusnamiga ku dhuftay xeebaha Indonisa inuu la midyahay kii ku dhuftay xeebaha India sanadkii 2004-tii waqtigaasi oo inka badan 300-qof ay ku geeriyoodeen tsunaamigii ku dhuftay xeebaha Puntland.
Warka wasaaradda ay soo saartay ayaa ah wargelin ka timid hay’ad ka shaqaysa saadaalada iyo ka hortagga masiibooyinka oo la yiraahdo WIO iyo hay’addo kale oo caalami ah sida agaasimuhu uu sheegay.